Funda ukusebenzisa i-mockup ukufaka uphawu lwakho ngokukhawuleza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Imifanekiso, Izibonelelo, Tutorials
I-Mockups yimifanekiso ebonakalayo Apho sinokufaka ngokuzenzekelayo uphawu lwethu, sikwazi ukubona ukuba luyasebenza okanye alusebenzi kwinkxaso yobomi. Kuqhelekile ukufumana ilogo ephepheni kwimvelaphi emhlophe kwaye wenze impazamo yokubonisa umthengi olo hlobo ukuza kuthi ga ngoku kwinyani, ngenxa yesi sizathu ukusetyenziswa kokuhlekisa ivumela ukuba songeze ilogo kumfanekiso ke ukufezekisa iziphumo ezinomtsalane ngakumbi kumthengi. Ayisiyo malunga nokuthengisa ngokuzoba kodwa ngokubonisa umxhasi umfanekiso wecandelo lakho kufutshane nenyani. Ukuhlekisa ngabantu abadibanisanayo nabayili.
Enkosi kuthungelwano sinokufumana uluhlu olukhulu lwe iwebhusayithi apho sinokuzikhuphelela khona (simahla okanye sihlawule) zonke iintlobo zeendlela zokuziphatha ngokweemfuno zethu. Sifumana kumakhadi oshishino, kwiimpawu zangaphandle, iiposta ... njl, uluhlu olubanzi lweendaba apho siya kuthi sikwazi ukufaka uphawu lwethu.
1 Uyisebenzisa kanjani i-mockup
2 Sebenzisa i-mockup kwi-Photoshop
Uyisebenzisa kanjani i-mockup
Ngoku masifunde indlela yokusebenzisa enye yezi mockups ukusuka ekuqaleni ngokukhuphela ifayile kwaye kamva ukongeza i-logo kwi-Photoshop.
Isishwankathelo samanyathelo okusebenzisa i-mockup (ungafunda okanye ubukele ividiyo):
Vula ifayile yePSD kwi Photoshop
Ukubetha cofa kabini kumaleko obomvu
Yongeza ilogo ekapa ebomvu.
Sebenzisa i-mockup kwi-Photoshop
Lo kuqala into esizakuyenza yile khuphela mockup nakweyiphi na iwebhusayithi, xa sele ikhutshiwe kufuneka sikhulule iifayile kwaye sivule ifomathi yePSD (Photoshop).
Siyavula el PSD kwaye sijonge umaleko we umbala obomvu, lo maleko ngoyena simele utshintsho eyethu Ilogo. Singazitshintsha ezinye idatha ezinje ngokuchwetheza, imibala, njl.njl. (Ukuhlekisa ngakunye kwahlukile).
Sinika cofa indawo kwi ikapa elibomvu kwaye siyayibona ukuba ivula njani kwenye ifestile yeFotohop, kulapho ke kufuneka sikwenze oko faka isicelo zethu logo okanye enye into.
ukuba Phelela e kufuneka nje gcina uxwebhu kwaye sinokubona iziphumo zokuhlekisa kwethu okumangalisayo.
Awusenazizathu xa kufikwa ekuboniseni umthengi ilogo yakho ngendlela enomtsalane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Funda ukwenza i-mockup ngophawu lwakho